Hong Kong : 40 Taona Aty aoriana, Mitsahatra Ny Fanontàna Ny Gazetiboky Manohitra Ny Kaominista · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Oktobra 2017 7:37 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Italiano, Português, Ελληνικά, 日本語, English
Laharana farany tamin'ny Cheng Ming sy ny Trend. Sary avy amin'ny HKFP.
Ity lahatsoratra ity dia nosoratan'i Kris Cheg ary navoaka voalohany tao amin'ny Hong Kong Free Press tamin'ny 3 Oktobra 2017. Ity dika eto ambany ity dia navoakan'ny Global Voices noho ny fifanaraham-piarahamiasa.
Nilaza ny gazetiboky Cheng Ming manohitra ny kaominista any Hong Kong fa hitsahatra tsy hamoaka intsony taorian'ny 40 taona nanontàna pirinty. Ny rahavaviny The Trend ihany koa dia tsy ho hita eny amin'ny toeram-pivarotana intsony. Na dia misy ifandraisany amin'ny fahafatesana vao haingan'ilay mpamorona ireo gazety roa ireo aza ilay fanapahankevitra, dia maro no naneho hevitra fa midika ho fiafaràn'ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety any Hong Kong ny fanjavonan'ireo gazetiboky mpanakiana ny antoko kaominista shinoa nandritra ny taona vitsivitsy ireo.
Ny 1 Novambra 1977 no nivoaka voalohany ny gazety mpiseho isam-bolana Cheng Ming, raha herintaona tao aoriany no nanombohan'ny The Trend. Namoaka lahatsoratra iraisana izay namela ireo mpiasa ao amin'ireo gazety roa ireo hametra-beloma amin'ny mpamaky izy roa ireo tamin'ny 1 Oktobra.
Na dia tsy mazava aza ny anton'ny fikatonana, dia nisaotra ireo mpamaky noho ny fanohanany nandritra ny 40 taona ilay lahatsoratra :
Nandritra izay 40 taona izay, dia nanome seha-pitenenana malalaka mba hitakiana ny demokrasia, ny zon'olombelona, ny fahalalahana ary nitsikera ny jadona sy ny kolikoly – tantara iarahantsika mahita – ireo gazetiboky roa ireo… Faly mitondra ireo nofinofy sy ny andraikitry ny taranaka iray, mamela ny dian-tongotray, mba handray anjara kely miaraka amin'izay kely nanananay tena voafetra sy kely ireo gazetiboky roa ireo.
Teraka tany Guangzhou, Shina, tamin'ny 1921 i Wen Hui, mpamorona sady mpamoaka ireo gazetiboky roa ireo, ary nifindra tany Hong Kong tamin'ny taona 1940. Nanatevina ny masoivohom-baovao miafin'ny Antoko Kaominista Shinoa tany Hong Kong izy talohan'ny nifindrany tany amin'ny gazety Wen Wei Po. Fa niala tamin'ny antoko izy taorian'ny Revolisiona ara-kolontsaina.
Nokianin'ny antoko ho “mpanohitra ny revolisiona” ireo gazetiboky roa ireo, taorian'ny lahatsoratra nosoratan'i Wen tamin'ny 1982 izay nitsikera ny mpitarika Shinoa Deng Xiaoping. Nandao an'i Hong Kong ho any Etazonia Wen tamin'ny 1997.
Tao amin'ny Twitter no nomen'i Gao Yu, mpanao gazety menavazana any amin'ny tanibe Shina, ny fanazavana feno momba ny fiakaran'i Wen ho mpanoratra mpanohitra :
[Veloma Atoa Wen Hui. Veloma ny Cheng Ming] Taorian'ny fiafaràn'ny Reviolisiona ara-Kolontsaina, tamin'ny taona faharoa, dia nanangana trano maro famoahana gazety ny vondronà mpanoratra menavazana izay nanana fifandraisana tamin'ny Antoko Kaominista Shinoa niaraka tamin'ny faneken'ny departemantan'ny asa ao amin'ny mandatehezana miray, ny biraon'ny Raharahan'i Shina any am-pitan-dranomasina sy Hong Kong ary ny biraon'ny raharahan'i Makao . Niandraikitra ny fanafahana ny fisainan'ny olona amin'ny fironana Maoista ry zareo.
Na izany aza, tamin'ny 30 Martsa 1979 dia naroson'i Deng Xiaoping tao amin'ny fivorian'ny vondron'asa momba ny fotokevitra ijoroan'ny antoko ny hevitra hoe ” Fitsipika Fototra Efatra ” [ Ireto avy ireo fototra efatra ireo : fitazonana ny soridàlana sosialista, didy jadona amin'ireo mpitrongy vao homana, fitantanan'ny Antoko Kaominista sy Fisainana Marksisma-Leninisma-Mao Zedong]. Kiana mibaribary no navalin'ny vondron'ny gazetiboky izany. Teo ambany tsindry goavana ara-politika, dia voatery nanova ny fomba fijeriny ireo mpanao gazety sasany. I Wen Hui no hany tokana nanolo-tena hiady amin'ireo ” Fitsipika Fototra Efatra “. Ny gazetibokiny, Chen Ming, nanomboka teo, no lazaina fa gazety “manohitra ny revolisiona”. Niasa ho an'i China News aho ary nanatri-maso ny fomba namonoan'ny milin'ny fampielezankevitra ny Cheng Ming. Nefa nihatsara hatrany hatrany ny fanaparitahana ny Cheng Ming. Afaka nivarotra dika 80.000 isaky ny mamoaka izy.
Namely mafy ny sehatry ny fanontàna tany Hong Kong ny fanjavonan'ny mpivaro-boky tany Hong Kong [tamin'ny2015]. Ankoatr'izay, teo ambanin'ny hetsika Manga/Ranombolamena/Mavo [Araka ny voalazan'i Guo Wengui, mpanefoefo Shinoa any an-tsesitany izay nilaza fa niasa tao amin'ny tambajotram-pitsikilovana shinoa, voatefy hanara-maso ny sehatra ara-barotra sy ara-politikan'ny vondrom-piarahamonina Shinoa any am-pitan-dranomasina ireny hetsika ireny]. Tsy malalaka intsony ny fanaovana gazety any Hong Kong sady tsy foiben'ny gazety manerantany intsony izy. Ny fotoana namoahana ny laharana farany tamin'ny Chen Ming sy ny The Trend dia taloha kelin'ny Kongresy Nasionaly faha 19-n'ny CCP, ny 1 Oktobra […] sady mifandraika tamin'ny fahafatesan'i Wen hui, 96 taona. Eto isika dia tokony hanaja ilay lahy antitra izay hentitra tamin'ny finoany nandritra ny androm-piainany. Hipetraka ho tantara ny lahateniny momba ny ady tamin'ireo Fitsipika Fototra Efatra mandra-paha tapitry ny ainy.
Notaterin'ny Oriental Daily, tamin'ny fitanisàna loharanom-baovao tsy fantatra anarana fa nifandraika tamin'ny fahafatesan'i Wen, izay nodimandry vao haingana tany New York teo amin'ny faha 96 taonany ilay fikatònana. Voalaza fa tsy te-hanohy hamoaka ireo gazetiboky ireo ny fianakaviany, izay lany vola.
Nefa, maro ireo toa an'i Gao Yu, izay mino fa mariky ny fiafaran'ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety any Hong Kong ilay fikatonana. Ohatra, @Moli, mpanoratra any ampitan-dranomasin'i Shina izay nandray anjara tamin'nireo gazetiboky maro manohitra ny CCP any Hong Kong dia naneho hevitra tao amin'ny Twitter :
Ireo gazetiboky telo izay nandraisako anjara an-taonany maro, Open Magazine [nitsahatra tsy niasa tamin'ny Desambra 2014], ny Trend sy ny Cheng Ming, dia samy nitsahatra tsy niasa. Te-hanoratra zavatra aho nefa tsy mahita ho lazaina. Amin'ny vanim-potoana tahaka izao, inona no azoko ambara ?